Esi jikọọ gam akporo na MAC nzọụkwụ site nzọụkwụ | Gam akporosis
Cristina Torres ebe a oyiyi | | Gam akporo Ndị aghụghọ, Nkuzi
Esi jikọọ gam akporo na Mac? Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ejikọtara ya na iji otu usoro na ụwa mkpanaka dịka ụwa nke ngwaọrụ desktọọpụ. N'ezie, m na-ekwu na ọ na-abụkarị na ọ bụrụ na onye ọrụ nwere iPhone, ha nwekwara Mac. Ma onye nwere gam akporo, ma ọ na-ahọrọ Windows, ma ọ bụ hapụ ya na nhọrọ ọhụrụ dịka Chromebooks. Ma Kedu maka ndị ọrụ nwere MAC na iPhone?
Ọ bụ ezie na a na-eche na ha abụghị ndị ka n'ọnụ ọgụgụ, na-eche na sistemụ arụmọrụ desktọọpụ nke Apple enwewo nnukwu uto na afọ ndị na-adịbeghị anya, yana gam akporo bụ nke a na-ejikarị n'ụwa eme ihe, enwere ike ị nweta azịza mgbe anyị jụrụ onwe anyị. esi jikọọ gam akporo na MAC. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ etu esi arụ ọrụ nke yiri ihe mgbagwoju anya, anyị kọwara n'okpuru otu esi eme ya na enweghị nnukwu nsogbu.
1 Nzọụkwụ site nzọụkwụ: otu esi jikọọ gam akporo na MAC
1.1 Nsogbu ndị nwere ike ibilite mgbe ijikọ gam akporo na MAC
Nzọụkwụ site nzọụkwụ: otu esi jikọọ gam akporo na MAC
Ọ bụrụ na ịnwalela nhọrọ nhọrọ kpochapụla nke jikọọ ihe gam akporo na Mac iji eriri USB ị ga-aghọta na ọ dịghị ihe na-eme. Nke ahụ bụ, ịnweghị ike ịnweta sistemụ mkpanaka gị dịka ọ ga-eme n'ọnọdụ ndị ọzọ. Nwedịrị ike ịnwale njikọ Bluetooth yana, enweghị isi. Gịnị ka i kwesịrị ime? Dị mfe, ịkwesịrị ịwụnye mmemme na Mac gị nke anyị kọwara n'okpuru.
Ihe mbụ anyị ga - eme iji nwee ike ijikọ ekwentị gam akporo na kọmputa MAC bụ ibudata ngwa ọrụ ahụ Nyefee faịlụ gam akporo na kọmputa gị.
Ozugbo inwetara ya, ịkwesịrị imeghe gam akporo Njikwa Nyefee mgbe ị nwere njikọ ngwaọrụ gị. N'ezie, n'ụkpụrụ, ọ kwesịrị imeghe na-akpaghị aka.
Iji nwee ike ohere si gị Mac gị gam akporo ngwaọrụ ị ga-enwe ka mobile ihuenyo agbachi.
Ikwesiri ijide n'aka na nhọrọ nke ngwaọrụ di na njiko USB di na mode «Multimedia device (MTP)»
Site n'ebe ahụ, ị ​​ga-enwe ike iji mmemme gam akporo Nyefee faịlụ, dọrọ na dobe faịlụ ngwa ngwa ma kesaa n'etiti ekwentị mkpanaaka gị na kọmputa MAC gị.
Ozugbo ị mechara omume ị ga - eme, ị ga - ewepu eriri USB ị jiri.
Nsogbu ndị nwere ike ibilite mgbe ijikọ gam akporo na MAC
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ya Gam akporo ngwaọrụ site na gị Mac Site na ntuziaka anyị nyere gị, ịnwere ike ịnwale usoro ndị a iji gbalịa idozi nsogbu ahụ:
Lelee na eriri USB gị ziri ezi, dịka ụfọdụ anaghị ekwe ka ị nyefee faịlụ.
Tụlee ma ọ bụrụ na microUSB cable nke ekwentị gị na-arụ ọrụ nke ọma
Nwalee USB n'ọdụ ụgbọ mmiri nke kọmputa gị na ngwaọrụ ọzọ iji jide n'aka na ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè.
Dị njikere na USB ọnọdụ gị gam akporo mobile ka atọrọ ka "Multimedia ngwaọrụ (MTP)"
Melite gam akporo os na ụdị kachasị dịnụ, dịka ụfọdụ ngwanrọ ngwanrọ nwere ike ịwe.
Dị njikere na kọmputa gị nwere ọhụrụ version nke OS dị na na ọ na-akwado usoro nyefee faịlụ site na gam akporo na MAC.
Tinyegharịa ngwaọrụ ahụ.
Dị ka ị hụrụ jikọọ gam akporo na MAC Ọ bụ usoro dị mfe yana ndụmọdụ anyị nyere gị nwere ike inyere gị aka idozi nsogbu ụfọdụ nwere ike ibute ma ọ bụ nrụrụ ngwaike, ma ọ bụ site na eziokwu na emelitere ngwanrọ iji dakọtara. Ugbu a ị ga-anwale ya, ma ọ bụrụ na ịchọrọ, kọọrọ gị ahụmịhe anyị na nkwupụta ahụ.
Ihe dị mma banyere Mac bụ na ị gaghị achọ ihe ahụ samsung USB ọkwọ ụgbọala dị ka a ga - asị na ọ na - eme maka ụfọdụ njedebe nke ụlọ ọrụ Korea mgbe ịchọrọ ijikọ ha na Windows.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Jikọọ Android na MAC
site na wifi, Bluetooth kwa
Magburu onwe…. Echetara m na nokia m jikọtara na ọ bụ ya. ma ugbu a ọ bụ ụzọ ọzọ, ị ga-achọ onye nke atọ. Daalụ maka ntinye
Zaghachi jose Leal
Zaghachi ka ọ bụrụ liptolipmakeup
ọ naghị arụ ọrụ, mepee windo ọcha ma kwụsịkwa ime ihe ọ bụla,
Omar apịtị dijo
Daalụ, ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe ịtụnanya, mgbanwe nke eriri ahụ bụ azịza ya, a na m eji otu ibu, ma amataghị m, ndụmọdụ ahụ dị nzuzu ruo mgbe ị ga-apụ na nsogbu, daalụ ọzọ.
Zaghachi Omar Mireles
Lynne na-akọ dijo
Ọ na-arụ ọrụ maka m! ??? N'ihi gịnị?
Zaghachi Lynne Torres
«Dị njikere na ọnọdụ USB nke gam akporo gị mobile ka atọrọ ka" Multimedia ngwaọrụ (MTP) "
Zaghachi na Angels Calvet
My Mac dị nnọọ ochie (mbipute 10.6.8) na ọ gaghị ekwe ka m wụnye gam akporo File Nyefee. Enwere ụzọ ọzọ? Daalụ!
Magburu onwe ¡¡¡¡, daalụ, bara ezigbo uru, nnukwu ihe ịga nke ọma nke nkuzi ahụ, ndị nnọchi anya ya kwadoro ya.
Ọ naghị enye m ebe ọ bụla, enwere m High Sierra na ekwentị m nọ na ọnọdụ MTP, ọ na-egosi naanị "jikọọ ngwaọrụ gị", ngwa Samsung adabaghị na High Sierra ma.
N'ehihie, m gbalịrị otu puku ụzọ iji jikọọ Samsung Note 8 m na Mac m agbasoro usoro niile yana ana m enweta njehie na ngwaọrụ ị jikọtara anaghị amata, gịnị ọzọ ka m nwere ike ịme
Zaghachi felipe prieto acosta
ọmarịcha, onyinye dị oke mma. O nyeere m aka.
Buenazooo !! Daalụ
Zaghachi Elizabeth Calancha
Ọ rụrụ ọrụ zuru oke !!!! 😀
Enweghị m ike ibudata faịlụ ahụ
«Must ga-agba mbọ hụ na nhọrọ nke ngwaọrụ dị na USB njikọ dị n'ọnọdụ" Multimedia device (MTP) "
Ihe a niile dị mfe ikwu, mana o siri ike ịchọta. Ebee ka m nwere ike ịhụ "nhọrọ ngwaọrụ na njikọ USB" na ekwentị m?
Should kwesịrị ịgwa onye ọ bụla okwu, n’ihi na ndị irighiri mmụọ ị na-agwa okwu amaralarị ihe ngwọta maka nsogbu ndị a, ya bụ, ị ga-akọwacha ihe niile n’usoro, n’agaghị ewere ihe ọ bụla n’ebere.